Nhau - Yakakwira Pressure Yakagadzirwa Simbi Valve
Nokusarudza vharuvhu ine muviri wakaumbika mushandisi anongoerekana awedzera kuchengetedzeka uye kuvimbika kwemuti wavo uye michina yekuita. Izvo zvagara zvichizivikanwa kuti vheji yekugadzira yakanyanya kuomarara, inopokana nekukanganisa, inomira yakakwira inokonzera pombi dzesimba uye zvakanyanya kurongeka kupfuura zvakaenzana castings.
Mazhinji madiki-ekumanikidza madhizaini emabhoneti akavezwa nehukuru hwakatetepa tambo dzakabatana kuti ubatanidze bhoneti uye yekumanikidza chisimbiso gasket. Iyo inonyatso kuzivikanwa muindasitiri kuti hombe dhayamita tambo dzinonetsa zvakanyanya panguva yekugadzirisa kunyanya mune yakanyanya tembiricha maficha uko nekufamba kwenguva oxides anokura mune tambo ichivapa izvo zvisingaite kupatsanura. Iyo nyowani SB dhizaini yekugadzira yekumanikidza chisimbiso ndiyo "diki-inobharura vharafu ine hombe mabhenefiti mabhenefiti". Iyi hunyanzvi inosanganisa maficha anowanzo chengeterwa makuru emabhureji emasaini mune ino yakashambidzika asi inogoneka pasuru. yakajairwa hombe dhayamita vharafu bhoneti dhonza bhaudhi dhizaini mune iyi diki-bore dhizaini.Iyo nyowani yakagoneka nekudzosera zvakajairika dhonza mabhaudhi mashini kuita jacking bhaudhi dhizaini
ZVINOGONESESWA MUNYIKA ZVINOGONESESWA
Iyo SB Series Muviri ine zvemukati zvakagadzirwa maOturator mahungwaru ayo ari echokwadi uye asinganetse zvakanyanya kupfuura akajairika ma welded magwara.
Magiraidhi akadzivirirwa anogona kutyora nekuda kwekushushikana uye kudengenyeka kana kunyangwe ngura uye zvinogona kukonzera zvikamu kupedzisira zvaitika. Kutadza kutungamira kunogona zvakare kukonzeresa kumisikidza vharuvhu.
Precision machined guides inokonzeresa mushoma obturator vibration. Yakashata Hunhu kutungamira kunokanganisa nzvimbo dzekugara.SB Series hunyanzvi iri mune chaiyo machining, zvichikonzera kuti iyo obturator ibatwe yakadzikama uye mune chaunoda chinzvimbo.
Mutumbi kuenda kuJoko kukwirisa pamusoro kunoiswa neCentering Bhegi iyo inoshanda senge mutungamiri weiyo Jacking Ring.
Bendekete rinotora iyo Jacking Ring nekudaro richidzivirira kusarongeka panguva yegungano uye rinochengeta iyo Ring iri panzvimbo apo jacking mabhaudhi anoshandisa simba rekutanga kubhoneti uye yekumanikidza chisimbiso gasket
Stainless simbi Ball mavharuvhu, Chiwanikwa Steel Ball mavharuvhu, Ndarira Ball Valve, Utsanana Stainless Steel Ball Ball mavharuvhu, Stainless simbi Ball Valve, Bronze Bhora Valve Ine Ptfe Zvigaro,